प्रमिला धराैटीमा छुटेपछि अन्याए भयो भन्दै फेरि विदेशबाट रुदै मिडियामा आए सन्तोष (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > प्रवास > प्रमिला धराैटीमा छुटेपछि अन्याए भयो भन्दै फेरि विदेशबाट रुदै मिडियामा आए सन्तोष (भिडियो सहित)
प्रमिला धराैटीमा छुटेपछि अन्याए भयो भन्दै फेरि विदेशबाट रुदै मिडियामा आए सन्तोष (भिडियो सहित)
admin February 13, 2020 प्रवास, भिडियो, समाज	0
आफुलाई छोडेर अर्कैलाई अंगाले पछि न्यायको खोजिमा रहेका सन्तोष सुनार फेरी पीडित भएका छन् । प्रमिला ५० हजार रुपैया धरोटीमा रिहा भएको खबर थाहा पाएपछि सन्तोषले रुँदै नेपालमा फोन गरेका थिए । प्रमिलासंग रंगेहात फेला परेका वर्दियाका सुरेश परियार भने कारागार चलान भएका छन् । प्रमिला छुटेको खबर पाएपछि आफु अन्यायमा परेको भन्दै सन्तोषले फेरी रुँदै मिडिया गुहारेका छन् । उनले प्रमिलाले गल्ती गरेको कुरा पुष्टि भइसकेकाे छ ।
यसरी गल्ती पुष्टी भए पनि कसरी धरौटीमा छुटिन भन्दै उनले प्रतिप्रश्न गरेका थिए । उनले विदेशमा यस्तो खबर थाहा पाएपछि आफु निकै दुखी भएको बताएका छन् । जिवनभर दुख गरेर श्रीमती र छोराोरीका लागि भनेर जम्मा गरेको सम्पत्ती समेत प्रमिलाले लिएर गएपछि उनी रुँदै मिडियामा आएका थिए । अहिले प्रमिला धरौटीमा छुटेपछि आफुले न्याय नपाएको महशुष गरेको पनि उनले बताए । उनले प्रमिलालाई छुटाउन खतरनाक गिरोह सकृय भएको भन्ने वारे आफुले जानकारी पाएको पनि बताएका छन् । उनले प्रमिलालाई धरौटीमा छुटाउने को हो त्यसको बारेमा बुझ्दिन पनि मिडियालाई आग्रह गरेका छन् ।
दुई छोराछोरीलाई छोडेर वर्दियाका सुरेश परियारसंग संग गएकी थिइन् । सुरेश पनि विवाहित हुन् । उनलाई सन्तोषले वहुविवाहको मुद्दा दिएका कारण प्रमिलालाई प्रहरीले हिरासतमा राखेको थियो । वैदेशिक रोगजारीका लागि नेपाल वाहिर रहेका सन्तोषले त्यहाँ कमाएको सबै सम्पत्ती प्रमिलालाई नै पठाउने गरेका थिए । तर दुई छोराछोरीको आमा समेत रहेकी प्रमिलाले धोका दिएपछि उनी आपतकालिन टिकट लिएर नेपाल फर्केका थिए ।
३५ दिन सम्म खोजी गरेपछि प्रमिलालाई उनले अर्कै पुरुषसंग एउटा कोठामा बसेको अवस्थामा रंगेहात फेला पारेका थिए । निकै माया गरेर राखेका सन्तोषले धोका पाएपछि रुँदै मिडियामा सहयोगको याचना सहित गुहार मागेका थिए । प्रमिलाको आमा भने छोरीलाई भेटेर आएको बताइन् । तर आमाले भने आफु साक्षी नबसेको बताएकी छन् । अहिले प्रमिला कहाँ छन् भन्ने आफुलाई थाहा नभएको पनि आमाले बताइन् ।
नाती नातिनाले आमा खोजिरहेको र छोरी आउन माने आफु ल्याउन तयार रहेको बताएकी छन् । उनले नाती नातिनीका लागि पनि छोरी माइतमा आएर बसेर हेरचाह गरिदिए राम्रो हुने बताइन् । त्यसो गर्दा सन्तोषलाई कस्तो लाग्ला त भनेर सोध्दा उनले त्यो त मलाई थाहा भएन अरुले भन्दा उसैले माया गर्लि नी आफ्नो छोराछोरीलाई उनले भनिन् ।
प्रमिला ५० हजार धरौटीमा छुटेको विदेशमा रहेका सन्तोषले थाहा पाएर निकै दुखी भएको बताएका छन् । प्रमिलालाई लैजाने अर्का पुरुष भने कारागार चलान भएका छन् । वर्दियाका सुरेस परियारसंग प्रमिला भागेकी थिइन् । प्रमिला ५० हजार धरौटीमा छुटे पनि सुरेस भने कारागार चलान भएको बताइएको छ ।
के मुनाको ह ’त्या गरेर आ’त्मह’त्या गरेका थिए विजय चौधरीले ? फरे’न्सिक रिपोर्ट ले के भन्छ? हेर्नुहाेस्
ज्ञानेन्द्र र हेमराज छुटेपछि प्रहरी चौकी अगाडि भयो यस्तो नारावाजी (भिडियो सहित)
रबिले सफाई पाएसँगै आइजीपी खनाल र एसपी मल्ललाई सत्य प्रमाणित गर्न रविको चुनौती (भिडियो सहित)